अब माइक्रोस्कोपबाट दाँतको उपचार - Health Today Nepal
March 4th, 2017 उपचार बिधी0comments
दाँत कीराले खाएको छ वा असाध्यै दुख्यो भने हामीलाई लाग्छ यो दाँत निकाल्न पाए त हाइसञ्चो हुन्थ्यो होला । कत्तिले त कीराले खाएपछि वा दुख्यो भने दाँत निकालेका पनि छौं होला । पहिले पहिले कीराले खाएको दाँत निकाल्नुको विकल्प पनि थिएन । चाहेर होस् वा नचाहेर पनि निकाल्नै पर्दथ्यो ।
केही केहीले दुखेको बेला आवेशमा आएर दाँत निकाल्न लगाइहाल्छन् । तर प्राकृतिक दाँत निकालेपछि त्यसका कारण आउने कठिनाइको अनुमानसमेत उनीहरुले गरेका हुँदैनन् । हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने कृत्रिम भनेको कृत्रिम नै हो । यसले कहिल्यै पनि प्राकृतिकको स्थान लिन सक्दैन । प्राकृतिक दाँतको महत्व निकालेपछि मात्र थाहा हुन्छ । प्राकृतिक दाँतले गर्ने काम, उसले दिने सुन्दरता र आत्मबल कृत्रिम दाँतबाट पाउन सकिँदैन । त्यसैले हिजोआज अधिकांश व्यक्ति सकेसम्म प्राकृतिक दाँत गुमाउन चाहँदैनन् ।
पछिल्ला वर्षमा दाँत निकाल्नेभन्दा बचाउन चाहने बढी रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
यही चाहना र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अहिले दाँतको उपचारमा विभिन्न नयाँ प्रविधिको विकास भइरहेको छ । अब दाँतमा कीरा लागेर नसा छोएर दुखेको दाँत निकाल्नै पर्छ भन्ने छैन । दाँतको दुखाइ हटाउँदै त्यही प्राकृतिक दाँतलाई बचाउन सकिन्छ । यो उपचार विधिलाई ‘रुट क्यानल ट्रिटमेन्ट’ भनिन्छ । यसलाई नेपाली भाषामा ‘जरानली उपचार विधि’ भन्न सकिन्छ । यस उपचार विधिमा दाँतको दुखाई कम गर्न र पछि गएर पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन अत्याधुनिक उपकरणको सहायताले दाँतको जराभित्रको नसा सफा गरेर त्यसको उपचार गरिन्छ । रुट क्यानलमा भरपर्दो विधि हो, ‘डेन्टल अपरेटिङ माइक्रोस्कोप ।’ माईक्रोस्कोपको सहायताबाट दाँतभित्र रहेको सानो चिजलाई ठूलो पारेर समस्याको पहिचान गरी उपचार गर्न सकिने भएकाले यो विश्वसनीय हुन्छ । परम्परागत रूपले रुट क्यानल गर्दा हेरेर, महसुस गरेर, छोएर र अनुभवका आधारमा गरिन्थ्यो । त्योभन्दा माइक्रोस्कोपको सहायताले गरिने उपचार बढी बैज्ञानिक मानिन्छ । विज्ञहरूका अनुसार यो प्रविधिमार्फत उपचार गर्दा थोरै दाँत काटेर नसाको उपचार गर्न सम्भव छ । जुन कुरा पहिले हेरेको भरमा मात्र सम्भव हुँदैनथियो ।
यो प्रविधिबाट उपचार गर्दा परम्परागत उपचार गर्दा दाँत बचाउन नसकिने अवस्थामा पनि बचाउन सकिने भएको छ । यसका साथै यो प्रविधि सुविधायुक्त छ । नेपालमा पहिलो पटक यो प्रविधि रुट क्यानल सेन्टरले भित्र्याएको हो । यो सेन्टर पाटन अस्पताल अगाडि रहेको ललितपुर मलको चौथो तलामा रहेको छ । रुट क्यानल विषयमा विशेषज्ञता एम.डी.एस. (मास्टर्स इन् डेन्टल सर्जरी) गरेका वरिष्ठ दन्त रोग विशेषज्ञ द्वय डा.सुमन गौतम र डा.आशा थापाको जोडीले एक वर्षपहिले यो प्रविधि पहिलो पटक नेपाल भित्र्याएका छन् । माइक्रोस्कोप बाहेक दाँतको उपचारमा प्रयोग हुने प्रविधि र अत्याधुनिक उपकरणसमेतको सेवा सेन्टरले प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
यो प्रविधिबाट डाक्टर र बिरामी दुवै पक्ष लाभान्वित भएका छन् । किनकि यसले दाँतमा भएको समस्याको सही पहिचान गर्न सहयोग गर्छ । समस्या पहिचान भएपछि उपचार गर्न सहज हुने गरेको डा.सुमन बताउँछन् । नेपालमा दाँत कीराले खाने आम समस्या हो । दाँतमा देखिने समस्यामध्ये करिब ८० प्रतिशत कीराले खानेसँंग सम्बन्धित हुन्छन् । पछिल्ला दिनमा जङफुडका कारण सानै उमेरदेखि दाँत कीराले खाने समस्या बढ्दै गइरहेको पाइएको छ ।
सबै कीराले खाएको दाँतको रुट क्यानल गर्नु पर्दैन । डा.आशा भन्छिन्, ‘दाँत कीराले खाएको पहिलो स्टेजमा छ भने सामान्य उपचारले पुग्छ । तर कीराले खाएर नसासम्म पुगेको अवस्था छ भने रुट क्यानल गर्नै पर्छ ।’ उनका अनुसार प्रविधिको विकासले रुट क्यानल गर्न अहिले थुप्रै पटक क्लिनिक धाउनु पर्दैन । एकदुई पटकमै विश्वासका साथ गर्न सकिन्छ ।
मुख स्वास्थ्यका विषयमा पहिलेको तुलनामा केही चेतना विस्तार भएको पाइएको छ । तर अझै पनि ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणमा दाँत तथा मुख स्वास्थ्यका विषयमा जनचेतना पुग्न नसकेकाले यो समस्या बढ्दै गइरहेको डा. सुमनको ठम्याइँ छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले पनि मुख स्वास्थ्यका बिषयमा जनचेतना जगाउने कामलाई महत्व दिएको छैन । मुटु, क्यान्सर, मिर्गौलाजस्ता रोगको विषयमा जनचेतना जगाएजस्तै मुख स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’
Previous article राजधानीमा फर्मा एक्पो सुरु
Next article रुट क्यानलमा अब्बल जोडी